Manahy Ireo Ogandey Fa Ho ‘Hihitsoka’ Miaraka Amin’ny Filoha Museveni Izy Ireo Rehefa Nofoanana Ny Volavolan-dalàna Momba Ny Fetran-Taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2018 5:59 GMT
Mpikambana ao amin'ny parlemanta Ogandey mifampitolona. Pikantsary avy amin'ny fandaharana navoakan'i Wolokoso Mu Uganda fantsona YouTube ofisialy.
Tany am-piandohan'ny volana Janoary 2018, semban-drahona ny media sosialy Ogandey taorian'ny nanasoniavan'ny filoham-pirenena ny lalàna iray izay mametra ny taona ambony indrindra ho an'ny filoham-pirenena na dia fantatra aza taorian'ny fanadihadiana fa manohitra ity fanovana ity ny ankamaroan'ireo Ogandey.
Midika ilay fanitsiana ny lalàm-panorenan'i Ogandà fa afaka mirotsaka ho fidiana fanineniny ny Filoha Yoweri Museveni, 73 taona, amin'ny taona 2021 ary mety hanitatra ny faha-32 taona nitondrany izy, ka mahatonga azy ho iray amin'ireo filoha nitondra ela indrindra eto Afrika.
Ny lalàna mampiady hevitra ihany koa dia nanitatra ny fe-potoana hiasan'ny mpanao lalàna Ogandey dimy ho lasa fito taona.
Tonga ny fanovana rehefa nakelezina ny sehatra fandraisana anjaran'ny olom-pirenena ary mbola manohy hatrany ny famoretany ny feon'ny mpanohitra ny manampahefana.
Tamin'ny taona 2016 ny fifidianana farany naha-lany an'i Museveni, fifidianana iray izay tsy nahafahan'ny mpanohitra niditra firy tamin'ny fampitam-baovao ary nahazo fandrahonana ny mpanao gazety sy ireo mpikambana tao amin'ny fiarahamonim-pirenena tamin'izany. ” Nilaza ireo mpanara-maso ao an-toerana fa tsy malalaka sy tsy ara-drariny ny fifidianana”, araka ny tatitry ny Human Rights Watch (Mpanara-maso ny ZonOlombelona) tao amin'ny Tatitra Manerantany taona 2017 :
Nitohy nandritra ny fampielezan-kevitra sy nandritra ny vanim-potoana talohan'ny fifidianana ny fanitsakitsahana ny fahalalahan'ny fikambanana, ny fanehoan-kevitra, ny fivoriana, ary ny fampiasan-kery tafahoatra ataon'ny mpitandro filaminana. Notanana vonjimaika tao an-tranony nandritra ny iray volana raha toa ka nikasa ny hanohitra ny valim-pifidianana ny kandidan'ny mpanohitra Dr. Kizza Besigye avy ao amin'ny Fivoriambe ho an'ny Fanovana Demaokratika (FDC) .
Nampiasa fitaovana tsy manara-dalàna ny polisy, anisan'izany ny bala tena izy mba hisorohana ny fivorian'ny mpanohitra am-pilaminana sy ny hetsi-panoherana, ka nahatonga ny fahafatesana matetika .
Nandritra ny adihevitra momba ny fetran'ny taona, tsy nanatrika ny mpikambana ao amin'ny parlemanta miisa 25 izay avy amin'ny antoko mpanohitra ny ankamaroany.
Niady an'ilay volavolan-dalàna ny vondrona mpanohitra politika Ogandey talohan'ny nahatongavan'izany tany amin'ny filoha ho soniavina ara-bakiteny. Nandritra ny fotoana samihafa, nafana ny toe-draharaha tao amin'ny parlemanta . Tamin'ny volana Desambra, nifidy tamin'ny vato miisa 315 manoloana ny 62 ho fanesorana ny fe-taona ny mpikambana.
Ogandey maro no naneho fahatezerana rehefa nanasonia ny volavolan-dalàna ho lalàna manan-kery tamin'ny 2 Janoary i Museveni. Hoy ny mpisera Twitter iray antsoina hoe Oma raha nanoratra :
32 taona tao anatin'ny tsy fahombiazana ary ankehitriny isika dia mbola mihitsoka miaraka amin'ity olona tsy mahomby sy tia tena ary manana governemanta kiantranoantrano ity!
Manahy i Musiime Alex Martin fa nametraka ohatra ratsy ho an'ny faritra i Museveni :
Hanalokaloka azy ny fitiavam-pahefany satria lasa manalavitra tanteraka izy amin'izao fotoana izao . Tena ratsy ny fanelezany izany ho an'ny mpitondra hafa ao amin'ny faritra.
Ny omalin'ny nanasoniavan'i Museveni ny volavolan-dalàna, nahatsiaro ny tenin'ny mpikambana iray tao amin'ny parlemanta, Henry Maurice Kibalya, ny Parliament Watch, hetsika iray tsy miankina ao amin'ny Foibe ho an'ny Fanadihadiana Ara-politika ao Oganda raha niresaka momba ny andininy momba ity fe-taona ity izy: ” Afaka manao fanovana ny Andininy faha 102 (b) isika amin'ny fivorian'ny parlemanta faha-10 fa tsy afaka manova ny fon'ny Ogandey “:
Amin'ny fotoana toy izao no tena ilaina ny vazivazy, araka ny siokan'i Kervy:
Ongandey feno fifaliana sy fientanentanana an-tapitrisany maro no nidina an-dalambe mba hankalaza ny fankatoavana ny volavolan-dalàna mikasika ny fe-taona efa nandrasana hatry ny ela
Raha jerena ny tantara vao haingana, na izany aza, tsy resaka mahatsikaiky izany ho an'ny mpanohitra politika na ny fiarahamonim-pirenena. Taorian'ny nankatoavan'ny parlemanta ny volavolan-dalàna momba ny fe-taona dia nanatontosa antsafa niaraka tamin'ny mpitondratenin'ny polisy ao amin'ny firenena ny NBS TV izay toa nanondro ny mpanohitra ho “ratsy saina”:
Tsy vao voalohany izao ny mpanao politika mpanohitra sy ny mpikatroka hafa no niantso ny vahoaka, ​​nangataka fanohanana avy amin'ny vahoaka … mba hanaovana hetsika tsy ara-dalàna. Na dia nandritra ny adihevitra momba ny fanitsiana ny lalàm-panorenana aza, dia nihetsika izy ireo , niezaka ny nidina an-dalambe araka izay azony natao. Na izany aza, eo anoloan'izy ireo izahay ary manohitra ny fikasan-dratsy izay tadiavin'izy ireo atao.